Axmed Madoobe Hogaamiye Soomaalinimadu ku weyn tahay. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxqabad, Xilkasnimo iyo Karti ayaa Aadanuhu isku dhaafay, guushuna iskama timaado ee waxay u baahan tahay dhiiranaan, daacadnimo iyo in loo dhabar adeygo howl walba oo la qorsheysto. Madaxda Soomaliyeed ee hadda ku guuleystey howlihii ay shacabkooda u hayeen waxaa tusaale fiican u ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe).
Madaxweynae Axmed Madoobe waxa uu ka mid yahay Hogaamiyasha Soomaalida, waxa uu siyaasadda Soomaaliya ka soo muuqday sanadkii 2006 markaas oo kacaan islaami ahi ka curtay Soomaaliya gaar ahaan koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Soo kabsashadiisii dhaawac lagaga soo daweeyey Itoobiya iyo dagaal Magaalada Kismaayo uu kula galay Alshabaab waxay gayeysiisey inuu kasoo Jabhadeeyo Gudaha Kenya, waxaana u suura gashay inuu gacanka ku dhigo Magaalada dekedda leh ee Kismaayo Octobar 2012 isagoo tageero ka helaya Ciidamada Kenya.
Axmed Madoobe oo xiriir la lahaa Wadamada deriska iyo Dowladdii Madaxwayne Xasan Shiikh, lana galay dhowr heshiis ayaa ugu dambayntii waxaa 15 Agosto 2015 loo doortay Madaxweynaha Dowled Goboleedka Jubbaland, kadib shir halkaasi ka socday ka badan laba sano.
Inkastoo aan dadka lawada qancin Karin hadana inta badan dadka ku nool Jubooyinka waa Ul iyo diirkeed, waxa uu ku caan baxay Axmed Madoobe oo lagu xasuusan doonaa Maamul Hufan, Codkarnimo, Go’aan qaadasho, U garab raricinta dadka taagta daran iyo xal u raadinta arimaha lagu kala aragti duwan yahay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waa Muwaadin Soomaalinimadu ku weyn tahay, marka aan ka hadleyno waaqiciga jira iyo waxyaabaha uu sameeyey oo marqaatiga laga yahay,waxa uuna Hogamiyaasha Asaaggii ah kaga duwan yahay dhowr Arimood.
1. Bartamihii sanadkii 2016, waxaa uu marti geliyey shir ay wada lahaayeen Madaxda Dowladda Federaalka Soomaliya iyo kuwa Maamul Goboleedyada waxaana uu shirka ka mamnuucay Calamada Dowled Goboleedyafa oo ay hore caado u ahayd in nin walba soo qaato Calankiisa, waxaana goobka shirka lagu xardhay oo kaliya Calanka Quruxda badan ee Soomaaliya taasoo dadkii si dareen leh u soo jiidatey..
2. Shirkii London ee arimaha Soomaaliya oo ay ka qayb galeen Madaxda Dowledda Federaalka iyo kuwa Dowled Goboleedyada waxa uu Axmed Madoobe ka sheegay iney wanaagsanaan lahayd in magaca Madaxwaynayaasha oo ay huwan yihiin madaxda Dowled Goboleedyada oo uu ka mid yahay ay qaataan magac kale si ay uga soocmaan Madaxwaynaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
3. Shirii Octoobar ee Muqdisho ka dhacay ee Hogaamiyaasha Soomaalida oo looga hadlayey sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhexeeya Dowladda iyo Maamulad Gobolda oo Madaxda qaarkood soo xirteen calaamad gaduudan, qaarna lasoo boodeen hal daqiiqo haloo istaago si ay ugu xasuustaan dadkii lagu laayey Isgoyska Soobe waxa uu Axmed Madoobe yiri isagoo dadka xasuusinaya waxa shareecadu ka qabto arimahan. “Maro gaduudan oo la xirto iyo dad dhintay in hal daqiiqo loo istaago diinta meel ay uga taalaahi ma jirto ee halga digtoonaado”.
4. Madaxda Maamulda Gobolda marka laga reebo Maamulka Jubbaland ee uu hogamiye Axmed Madoobe, waxay dhamaantood sida ay hadalka u dhigeen xiriirkii u jareen dowladda Qadar waxayna shaaciyeebn iney khilafayaan go’aankii dowladda dhexe uga noqotay dhexdhexaad khilaafka wadmada gacanka, Axmed Madoobe waxa uu qaatay mowqif ka duwan kan ay qaateen madaxda maamulada gobolada waxa uuna xadgudub u arkay talaabada ay saaxiibadiis qaadeen.
Si kastaba Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) waa Hogaamiye ay Soomalinimadu ku weyn tahay, sababtoo ah haddii aanu saas ahaan lahayn mar hore ayuu dhex dabaalan lahaa dhiiqada ay Saaxiibadiis ka bixi la’yihiin, dhinaca kale dadka Siyaasadda falanqeeya waxay rumeysan yihiin in aanu Jubbaland kasoo bixi karin shaqsi bedeli kara Sheikh Axmed Madoobe 10-ka sano ee soo socota, kaasoo hadda Siyasadda ku jira..